စဉ် DT2 • Downtown Dutchtown ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုစီးပွားရေးအသင်းအဖွဲ့တစ်ခုမျှသာမဟုတ်ဘဲကျယ်ပြန့်စွာချဲ့ထွင်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ရပ်ကွက်အတွင်းရှိအသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုတတ်နိုင်သမျှပံ့ပိုးကူညီရန်ရည်ရွယ်ထားဆဲဖြစ်သည်။ အောက်ဖော်ပြပါအရင်းအမြစ်များစုဆောင်းခြင်းသည်ပြည့်စုံလုံလောက်သောစာရင်းမဟုတ်သော်လည်း၎င်းတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်လည်ပတ်ရန်အတွက်လမ်းညွှန်မှုပေးနိုင်သည်။
စိန့်လူးဝစ္စမြို့၏ဗျူရိုကရေစီယန္တရားအမျိုးမျိုးကိုစီးဆင်းရန်စိန်ခေါ်ချက်တစ်ခုဖြစ်နိုင်သည်။ စိန့်လူးဝစ္စတွင်သင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်နေစဉ်သင်နှင့်ဆက်ဆံရဖွယ်ရှိသည့်အချို့ရုံးများအတွက်ဆက်သွယ်ရန်နှင့်အကြံပေးချက်များကိုအောက်တွင်ကျွန်ုပ်တို့ဖော်ပြထားသည်။ ရုံးအများစုသည် Market Street ရှိ City Hall နှင့် Tucker Boulevard တွင်တည်ရှိပြီးရုံးဖွင့်ချိန်သည်နံနက် ၈ နာရီမှညနေ ၅ နာရီအထိတနင်္လာနေ့မှသောကြာနေ့အထိဖြစ်သည်။
မြို့တော် စီးပွားရေးအကူအညီပေးရေးစင်တာ သင်မြေပြင်မှထွက်လာရန်အကူအညီလိုသည့်အခါသင်၏တစ်နေရာတည်း၌ရပ်နားရန်နေရာဖြစ်သည်။ သူတို့သည်သင်၏စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုမှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ အခွန်အကောင့်များကိုစီမံခြင်း၊ ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့်အခြားအရာများကိုကူညီနိုင်သည်။ လိုအပ်သောပုံစံကိုမေးလ် (သို့) အီးမေးလ်ဖြင့်တောင်းခံနိုင်သည် BAC ၀ န်ထမ်းများကသင်လူကိုယ်တိုင်သွားရောက်လိုသည့်အခါ City Hall သွားလာရန်ကူညီပါလိမ့်မည်။
BAC အီးမေးလ် - bac@stlouis-mo.gov
BAC တယ်လီဖုန်း: (314) 622-4120
BAC ရုံး: City Hall၊ အခန်း ၄၂၁
စိန့်လူးဝစ္စစီးတီးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအားလုံးသည်လက်ရှိစီးပွားရေးလိုင်စင်ကိုထိန်းသိမ်းရန်လိုအပ်သည်။ ဤရွေ့ကားအားဖြင့်ထုတ်ပေးလျက်ရှိသည် လိုင်စင်ကောက်ခံရေးရုံး။ စီးပွားရေးလိုင်စင်အဖြစ်အသိအမှတ်ပြုထားသောအခြေခံလိုင်စင်အပြင်၊ ဒါဇင်ကျော်ကျော်ရှိသည် အထူးလိုင်စင် အချို့သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများဖြစ်သောစားသောက်ဆိုင်များ၊ နေ့စဉ်ဂရုစိုက်မှုများ၊ ကန်ထရိုက်တာများနှင့်အခြားအရာများမှာပုံမှန်လိုင်စင်အပြင်ဆက်လက်ထိန်းသိမ်းထားရမည်။
လိုင်စင်ကောက်ခံသူတယ်လီဖုန်း: (314) 622-4528
လိုင်စင်ကောက်ယူသည့်ရုံး: City Hall၊ အခန်း ၄၂၁
အဆိုပါ အခွန်၏ကောက်ခံရေး စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမှတင်သွင်းခြင်းနှင့်ပေးဆောင်ခြင်း၏အခွန်အခအမျိုးမျိုးကိုစုဆောင်းပြီးထိန်းသိမ်းသည်။ စီးပွားရေးလိုင်စင်ရရှိရန်သို့မဟုတ်သက်တမ်းတိုးရန်အခွန်အားလုံးသည်လက်ရှိဖြစ်ရမည် - သင်၏အကောင့်သည်ပွင့်လင်းပြီးတက်ကြွရမည်၊ သင်၏အခွန်များကိုလည်းအပြည့်အဝပေးရမည်။
စီးတီးတွင်စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေသောအဖွဲ့အစည်းအားလုံးသည် ၁% ခံစားခွင့်ရှိသည်။ ဝင်ငွေခွန်အခွန် သူတို့ရဲ့အသားတင်အမြတ်အပေါ်။ ထို့အပြင် ၀ န်ထမ်းများရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများသည် ၀ န်ထမ်းများ၏လစာမှ ၀ င်ငွေခွန်ကိုတားဆီးရန်နှင့် ၀.၅% လစာကုန်ကျစရိတ်အခွန်ကိုပေးရန်လိုအပ်သည်။
ဝင်ငွေခွန်တယ်လီဖုန်း (314) 622-3291
ဝင်ငွေခွန်ရုံး City Hall၊ အခန်း ၄၂၁
နာမည်ကမင်းကိုမလှည့်စားပါနဲ့ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးပိုင်ဆိုင်မှုအခွန် မည်သည့်မော်တော်ယာဉ်များ, ကုန်ထုတ်လုပ်မှုပစ္စည်းကိရိယာများ, ဒါမှမဟုတ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ဆိုင်သည်အခြားပိုင်ဆိုင်မှုအပေါ်။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းဆိုင်ရာပုဂ္ဂိုလ်ရေးဆိုင်ရာအခွန်ကိုဆုံးဖြတ်သည် အကဲဖြတ်ရုံး နှင့်အခွန်များ၏ကောက်ခံရေးကစုဆောင်း။
အိမ်ခြံမြေအခွန်တယ်လီဖုန်း: (314) 622-4111
အိမ်ခြံမြေအခွန်ရုံး: City Hall၊ အခန်း ၄၂၁
စီးတီးရှိစီးပွားရေးလုပ်ငန်းအများစုသည်လိုအပ်လိမ့်မည် စီးပွားဖြစ်နေထိုင်ခွင့်ပါမစ် သူတို့လည်ပတ်ရာမှအာကာသသည်။ နေထိုင်ခွင့်ပါမစ်များကိုမှတဆင့်ထုတ်ပေးပါသည် ပြည်သူ့လုံခြုံရေးဌာန၏ဆောက်လုပ်ရေးဌာန။ သင်၏ခွင့်ပြုချက်သည်ဆောက်လုပ်ရေး၊ စက်မှု၊ ရေပိုက်နှင့်လျှပ်စစ်စစ်ဆေးရေးမှူးများနှင့်မီးသတ်တပ်ဖွဲ့များမှစစ်ဆေးခြင်းအပေါ်တွင်မူတည်သည်။ သို့သော်သင်၏ခွင့်ပြုချက်ကိုရရှိပြီးသည်နှင့်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလက်ပြောင်းသည်အထိတရားဝင်သည်။
သင်အိမ်မှစီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုလုပ်နေသည်ဆိုလျှင်ပင်သင်စစ်ဆေးခြင်းမခံရသော်လည်းနေထိုင်ရန်ခွင့်ပြုချက်လိုအပ်သည်။ ဒီခွင့်ပြုချက်ကို Home Occupancy Waiver လို့ခေါ်တယ်၊ ပြီးတော့ဒီအဆောက်အအုံဌာနခွဲကနေလည်းဒီခွင့်ပြုချက်ကိုသင်ရနိုင်တယ်။
အဆိုပါအဆောက်အ ဦး ဌာနခွဲကိုလည်းအတော်ကြာကိုင်တွယ် ခွင့်ပြုချက်၏အခြားအမျိုးအစားများသင်၏စီးပွားရေးတည်နေရာကိုပြောင်းလဲရန်လိုအပ်ပါကဆောက်လုပ်ရေးပါမစ်များအပါအ ၀ င်။
အဆောက်အ ဦး ဌာနတယ်လီဖုန်း: (314) 622-3313
အဆောက်အ ဦး ဌာနရုံး: City Hall၊ အခန်း ၄၂၁
စားသောက်ဆိုင်များအပိုလိုအပ်လိမ့်မည် ခွင့်ပြုချက်, စစ်ဆေးခြင်းနှင့်လက်မှတ်များ။ ဤအရာအများစုကိုကအုပ်ချုပ်နေကြသည် ကျန်းမာရေး၏စိန့်လူးဝစ် ဦး စီးဌာနသင်၏ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုခံယူမည့်ပုံမှန်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများကဲ့သို့ပင်။
ကျန်းမာရေးဌာနတယ်လီဖုန်း: (314) 657-1539
ကျန်းမာရေးဌာနရုံး - 1520 Market ကလမ်း, အခန်း 4051
အကယ်၍ သင်သည်အရက်ကိုအိမ်တွင်းစားသုံးရန်အတွက်ရောင်းချရန်သို့မဟုတ်သွားရန်ထုပ်ရန်စီစဉ်လျှင်သင်တစ်ခုသို့မဟုတ်တစ်ခုထက် ပို၍ လိုအပ်လိမ့်မည် အရက်လိုင်စင် မှ ပြည်သူ့လုံခြုံမှု ဦး စီးဌာန၏ယစ်မျိုးဌာန။ အဆိုပါ လျှောက်လွှာလုပ်ငန်းစဉ် နည်းနည်းရှုပ်ထွေးသောဖြစ်နိုင်သည်, ဒါကြောင့်အချို့သော legwork နှင့်လမ်းတစ်လျှောက်ဖြစ်နိုင်သောပြcomplနာများအတွက်ပြင်ဆင်ထားပါ။
ယစ်မျိုးဌာနတယ်လီဖုန်း: (314) 622-4191
ယစ်မျိုးဌာနခွဲ: City Hall၊ အခန်း ၄၂၁
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုစတင်သောအခါသင်လိုအပ်သောပထမ ဦး ဆုံးအချက်မှာသင်၏အခွန်မှတ်ပုံတင်နံပါတ်များဖြစ်သည်။ သင်လုပ်နိုင်သည် ဖက်ဒရယ်အခွန် ID ကိုလျှောက်ထားပါ IRS ၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်လည်း (အလုပ်ရှင်ဖော်ထုတ်ရေးနံပါတ် (သို့မဟုတ်) EIN ဟုလည်းသိကြသည်)) ။
သင့်တွင် ၀ န်ထမ်းများရှိလျှင်သို့မဟုတ်ကုန်ပစ္စည်းများရောင်းနေလျှင်သင့်တွင်ပြည်နယ်အခွန် ID နံပါတ်လည်းလိုအပ်သည်။ မစ်ဆူရီအခွန် ID အတွက်လျှောက်ထားပါ နှင့်အကြောင်းကိုရှာပါ အမျိုးမျိုးသောပြည်နယ်အခွန် မစ်ဆူရီအခွန်ဌာန ၀ ဘ်ဆိုဒ်ပေါ်မှာ။
မစ်ဆူရီပြည်နယ်အတွင်းရေးမှူးက ပုံစံများ၏စာရင်း သင်၏စီးပွားရေးအမည်ကို (မှားယွင်းသောအယူအဆဟုခေါ်သည့်အမည်) ကိုမှတ်ပုံတင်ရန်၊ သင်ထည့်သွင်းရန်ဆောင်းပါးများနှင့်အခြားအရာများပြုလုပ်ရန်။
သင်၏စီးပွားရေးကိုဈေးကွက်တင်ရန် DT2 နှင့် DutchtownSTL တို့ကလိုချင်သည်။ ဆက်သွယ်ရန် သင်၏အထူးဖြစ်ရပ်များနှင့်အရောင်းအဝယ်များအကြောင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ ၀ က်ဘ်ဆိုက်နှင့်လူမှုမီဒီယာလိုင်းများမှတစ်ဆင့်သင်၏စီးပွားရေးကိုမြှင့်တင်နိုင်သည်။ သင်တို့သည်လည်းငါတို့၏ပါဝင်နိုင်နိုင်ပါသည် Dutchtown နေရာများလမ်းညွှန် Dutchtown တွင်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ရန်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုလူအများရှာဖွေရန်ကူညီသည်။
ကျွန်ုပ်တို့တွင်ကြိုဆိုသော packets များလည်းရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းအသစ်များနှင့်လက်ရှိစီးပွားရေးနှစ်ခုစလုံးကိုဝေမျှလိုသည့်အတွက်ဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာရှိကြသည်။ ၎င်းတို့သည်သင်ကိုယ်တိုင်နှင့်သင်၏အိမ်နီးချင်းစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များအတွက်သင်၏အထောက်အပံ့ကိုပြသရန် Support Dutchtown Businesses ၀ င်းဒိုးစတစ်ကာဖြင့်လာသည်။ ဆက်သွယ်ရန် သင်က packet ကိုသုံးနိုင်သည်တဲ့စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတစ်ခုသိလျှင်။
ကျွန်ုပ်တို့၏လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်များမှာ မစ်ဆူရီပင်မလမ်းဆက်သွယ်မှု ၏နံပါတ်စုဆောင်းနေကြသည် COVID-19 ကူးစက်ရောဂါမှတဆင့်အလုပ်လုပ်သောစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရင်းအမြစ်များ။ ငါတို့လည်းမကြာသေးမီကသတင်းအချက်အလက်ထုတ်ဝေပါတယ် အသေးစားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းပိုင်ရှင်များမှရရှိနိုင်ပါသည်ထောက်ပံ့ငွေ စိန့်လူးဝစ်၏စီးတီးမှ။ ကျနော်တို့အဲဒီစာမျက်နှာကို update လုပ်ပါလိမ့်မယ် dutchtownstl.org/grants.
DutchtownSTL ကဖန်တီးလိုက်သည် သင်၏စီးပွားရေးကိုဂူဂဲလ်တွင်စာရင်းသွင်းရန်အဆင့်ဆင့်လမ်းညွှန်ဗီဒီယိုနှင့်ရေးသားထားသောညွှန်ကြားချက်များပါရှိသည်။ ကျနော်တို့ကပိုစီစဉ်ထားလမ်းညွှန်ရှိသည်။ မင်းကြည့်ချင်တဲ့လမ်းညွှန်ရှိလား။ ကျွန်တော်တို့ကိုအသိပေးပါ.
ကျနော်တို့မျှဝေဖို့အရင်းအမြစ်များကိုပိုမိုတွေ့သောအခါငါတို့သည်ဤစာရင်းကိုတိုးချဲ့ပါလိမ့်မယ်။ သင်ကြည့်ချင်သောအရာတစ်ခုခုရှိပါက ကျေးဇူးပြု၍ ထည့်ပါ ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ သင်၏စီးပွားရေးကိုစတင်ရန်သို့မဟုတ်ကြီးထွားရန်အတွက်အထောက်အကူဖြစ်စေမည့်လမ်းညွှန်များကိုလည်းကျွန်ုပ်တို့ထုတ်ဝေမည်။ ပြန်စစ်ဆေးပါ dutchtownstl.org/ စီးပွားရေး ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ရာတွင်ကျွန်ုပ်တို့ဘာတွေကမ်းလှမ်းရမလဲဆိုတာကြည့်ဖို့။
ထိပ်တန်းဓာတ်ပုံ by ရှင်ပေါလု Sableman.
ဒိန်းမတ် ကျွန်ုပ်တို့၏ Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများကိုထောက်ပံ့ခြင်း Dutchtown စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အရင်းအမြစ်များ